Namory ny mpandraharaha ny orin’asa Holcim
Fifanakalozan-kevitra sy fizarana traikefa no nandaniana ny fotoana
Manorina mba aharitra io no teny filamatry ny orin′asa Holcim eto Madagasikara. Nanao atrik′asa fifanakalozana sy fizarana traikefa tamin′ireo tambato teto Toamasina ny orin′asa Holcim, ny asabotsy 2 aogositra lasa teo, tao amin′ny Restaurant miramara. Izao natao mba nanaovana fifanakalozana tamin′ireo mpanjifa sy mpampiasa simenitra izay vokarin′ny Holcim. Atrik′asa notarihin′i Rtoa Nirina RABEZANDRINA, tale ara-barotra ny holcim eto Madagasikara sy ireo mpiara miasa aminy ato Toamasina.
Tonga nanotrina izany ihany koa ireo entreprise sasantsasany sy ireo mpivarotra brique vita amin′ny simenitra teto Toamasina. Isany nivohitra tamin′io hetsika io ny haro loza raha mampiasa simenitra vitan′ orin′asa Holcim, araka ny fantatra mantsy tao anatin′ny 60 taona izay dia mihezaka manatsara ny vokatra hatrany izy ireo sy manakaiky hatrany ireo mpanjifa ny vokatra. Toerana roa ihany no ahitana ny vokatra vokarin′ny Holcim dia ny ao Ibity Antsirabe ary ny eto amin′ny Port Toamasina. Mahatratra 480 000 Tonnes isan-taona mantsy ny simenitra vokarin′izy ireo ary miparitaka manerana ny nosy. Hetsika efa fanaon′izy ireo isan-taona toy izao mba ho fanakalozana amin′ireo matianina, misy ihany koa ireo paikadin′izy ireo amin′ny fanatonana misimisy kokoa ny mpanjifa.
(66) Prud′Homme RAKOTOSON : 04-08-2014 - 08:30